Liverpool oo dalab cusub ka gudbisay Thiago Alcântara – Gool FM
(Yurub) 11 Sebt 2020. Shabakada “VarskySports” ayaa shaacisay in kooxda Liverpool ay gudbisay dalab dhigeeda Bayern Munich, si ay kaga soo qaadato ciyaaryahanka khadka dhexe reer Spain ee Thiago Alcântara.
Ilo-wareedka ayaa xaqiijiyay in Liverpool ay dalab hor leh u gudbisay kooxda Bayern Munich, kaasoo gaaraya qiimo dhan 28 million pounds, si ay kaga qaadato Thiago Alcântara.
Sida ay wararku sheegayaan kooxda Liverpool iyo Thiago Alcântara ayaa ka wada heshiiyay shuruudaha heshiiska uu ku imaanayo garoonka Anfield, balse kaliya ay harsan tahay inay wada hadlaan labada kooxood, si loogu ogolaado ciyaaryahanka reer Spain inuu baxo.
Waa wax iska cad in Bayern Munich ay dooneyso dalab ka weyn kan la soo bandhigay, maadaama ay ku doonayaan inay ku fasaxaan Thiago Alcântara qiimo lacageed dhan 32 million euros, balse Reds ma dooneyso inay bixiso lacagtaan, gaar ahaan maadaama qandaraaska laacibka uu dhacayo xagaaga soo aadan.
Thiago Alcântara oo sidoo kale bartilmaameed u ahaa kooxdiisii hore ee Barcelona ayaa muhiim ka ahaa shaxda Bayern Munich sannadihii u dambeeyay wuxuuna door muuqda ka qaatay in Bayern ay ku guuleysato koobka Champions League sanadkan, kaddib markii uu ka qayb galay 40 kulan oo tartamada dhan ah.